Njegharị Zohery - Njem nlegharị anya Washington DC
Njem nlegharị anya Washington DC
Grand Tour nke Washington DC
Ụbọchị zuru ezu Washington DC & Ugwu Vernon Tour
Nnukwu njem nke Washington DC & Arlington Cemetery
Alexandria & Ugwu Vernon Tour
Njem nlegharị anya abalị Washington DC
Njem Ugwu Vernon + Njem abalị Washington DC
Njegharị nlegharị anya nkeonwe nke DC
Njem mmụta mmụta ụmụ akwụkwọ
Njem nlegharị anya n'ịntanetị
Ọrụ ationgbọ njem
Ụgbọ ala na ụgbọ ala maka ọrịre
Kpọọ ntuziaka nlegharị anya DC
Bụrụ onye nduzi nlegharị anya DC $100 kwa izu
Nnọọ na njem nlegharị anya Zohery - Njegharị Washington DC
Njem Zohery bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eduga na-enye njegharị Washington DC. Ọ nọwo na-azụ ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 na-atọ ụtọ nke ọtụtụ puku ndị njem nleta si n'akụkụ nile nke ụwa na-eleta. DC bụ obodo pụrụ iche nke na-egosipụta oge gara aga nke obodo a yana ihe ncheta ya niile nwere akụkọ ihe mere eme nke ha.
Site na njem nlegharị anya Zohery ị ga-enweta ahụmịhe nlegharị anya DC kacha mma. Anyị na-egosi gị karịa ụlọ na ihe ncheta nke isi obodo obodo. Ị na-amalite njem nlegharị anya akụkọ ihe mere eme nke ị ga-achọpụta ebe ndị omebe iwu na ndị na-ama jijiji nke obodo na-eme ihe ha na-eme. Ebe a na-ebipụta ego gị. Ebe Onye isi ala na ndị isi ndị ọzọ efeela ofufe. Ebe ndị VIP na-eri nri ehihie ha, ma ọ bụ mgbo, ma ọ bụ na-ejegharị maka ezumike ụtụtụ.
Ụfọdụ n'ime nnukwu akara ngosi ị ga-ahụ na njegharị dc anyị bụ: White House, US Capitol, Memorial Jefferson, Lincoln Memorial, Agha Ụwa nke Abụọ, Ncheta Martin Luther King, Union Station na ọtụtụ ndị ọzọ…
Ịdenye njem nlegharị anya na anyị ga-abụ ọnụ ụzọ gị iji mee njem site n'oge gara aga na azụ ruo ugbu a. A na-akọ njem nlegharị anya anyị na onye ndu njem nlegharị anya nke ga-akọrọ gị akụkọ dị n'azụ akara obodo ọ bụla. N'iji ọtụtụ ihe nyocha na obere oge, anyị emepụtala gị ngwugwu njegharị nke ga-adabara ọtụtụ. Anyị nwere njem nlegharị anya ụbọchị - Nnukwu njem nke Washington, DC - na njem mgbede - Washington Mgbe Ọchịchịrị gasịrị. Maka ndị chọrọ ịpụ n'okporo ụzọ ndị a kụrụ akụ, anyị nwere ọrụ njem nlegharị anya nke a ga-ahazi dịka mkpa na mmasị gị siri dị.
Banye n'ụgbọ ahụ, a ga-emeso gị njem nleta ụbọchị mmụta nke DC, ụdị njem a na-echetara nke ọma.
site na 400 block New Jersey Avenue, na akuku D street NW Washington DC 20001
Nwebiisinka © 2022 · Njegharị Zohery